comme-un-pro.fr dia miantoka ny hitazona ity tranokala ity ho vaovao ara-potoana. Na izany aza, raha sendra olana ianao na angon-drakitra efa lany andro, dia ho faly izahay raha ampahafantarinao anay. Tondroy azafady hoe aiza ao amin'ny tranokala no mamaky ny fampahalalana diso. Hojerentsika haingana izany. Alefaso azafady ny valinteninao amin'ny e-mail To: tranquillus.france@comme-un-pro.fr.
Tsy tompon'andraikitra amin'ny fahaverezana vokatry ny tsy fahatomombanana na ny tsy fahampiana izahay, na ny fatiantoka vokatry ny olana ateraky ny na voajanahary amin'ny fanaparitahana vaovao amin'ny Internet, toy ny fanelingelenana na fanelingelenana. Rehefa mampiasa endrika web dia manao izay ezaka rehetra hitazomana ny isan'ireo saha tsy maintsy atao izahay. Ho an'ny fahaverezana rehetra nijaly vokatry ny fampiasana data, torohevitra na hevitra nomen'ny na amin'ny alàlan'ny comme-un-pro.fr amin'ny alàlan'ity tranonkala ity, comme-un-pro.fr dia tsy mandray andraikitra.
Ny fampiasana ny tranokala sy ny singa rehetra ao aminy (ao anatin'izany ny forum) dia iharan'ny fepetra fampiasana. Ny fampiasana an'ity tranonkala ity fotsiny dia midika hoe fahalalana sy fanekena ireo fepetra fampiasana ireo.
Ny valiny sy ny fangatahana fampahalalana momba anao manokana natolotra tamin'ny alàlan'ny mailaka na ny fampiasana tranokala dia hokarakaraina amin'ny fomba mitovy amin'ny taratasy. Midika izany fa afaka manantena valiny avy aminay ianao ao anatin'ny iray volana farafaharatsiny. Raha misy fangatahana sarotra dia hampahafantatra anao izahay ao anatin'ny iray volana raha mila 3 volana farafahakeliny.
Izay angon-drakitrao manokana omenao anay ho ampahan'ny valinteninao na fangatahanao fampahalalana dia tsy hampiasaina afa-tsy amin'ny fanambarana miafina anay.
comme-un-pro.fr dia mandà ny andraikitra rehetra amin'ny atin'ny tranokala izay anaovana hyperlink na referansa hafa. Ny vokatra na serivisy natolotry ny antoko fahatelo dia miankina amin'ny fepetra sy fepetra ampiharina amin'ny antoko fahatelo toy izany.
Ny zon'ny fananana ara-tsaina rehetra ao anatin'ity tranonkala ity dia fananan'ny comme-un-pro.fr.
Ny fanaovana kopia, ny fizarana ary ny fampiasana hafa ireo antontan-taratasy ireo dia voarara raha tsy nahazo alalana an-tsoratra ny comme-un-prob.fr, afa-tsy raha toa ka sy araka izay voafaritry ny lalàna tsy maintsy atao (toy ny zon'ny mitanisa), afa-tsy ny mifanohitra amin'ny fanondroana ny atiny.
Raha manana fanontaniana na olana momba ny fidirana amin'ny tranokala ianao dia aza misalasala mifandray aminay.